septembre 5, 2021 adminMultimédiaLeave a Comment on TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF
Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho. Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany. Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy? Fandrao maty aho noho ny aminy. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao.
Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Andrao hisy loza hanjo azy. Izao no famantarana ny malahasy izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Fa nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy.
Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Lehibe ny pdff heloko mihoatra noho izay zakako. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any pdr ianao; ary aminao sy ny taranakao no malagash ny firenena rehetra ambonin’ny tany.
Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana.
Chapitre 33 1 Ary Malagady dia pdg ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany. Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona rainy izy.
Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary baiboyl iny ka lasa any ala-trano.
Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy.
Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy.
Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano. Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa. Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny.
Anadahiko izy; gaiboly tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako baibly.
Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao. An’i Jakoba mpanomponao ireo, dia zavatra nampanaterina ho an’itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao. Jehovah Tompo ô, ahoana no baibolt fa handova ity aho?
baiiboly Ary hoy kosa Jakoba: Inona ary no homeko anao? Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko.
Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, ;df efa antitra koa itompokolahy?
Mba ampisotroy rano kely aho. Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra.
Izany no Esao, rain’ny Edomita. Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Dia hoy Josefa taminy: Eny, aoka ho araka ny teninao ary.